Go’aano Ka Soo Baxay Shirkii Todobaadlaha ee DHH – WARSOOR
Go’aano Ka Soo Baxay Shirkii Todobaadlaha ee DHH
HARGEYSA – (WARSOOR) – Qodobadii ka soo baxay Kulanka Todobaadlaha ah ee u dhexeeya Maamulka Sare Fulinta Dawladda Hoose ee Hargeysa, Agaasimayaasha Waaxaha kala duwan, Gudoomiyayaasha Degmooyinka Caasimadda iyo Gudoomiyayaasha Shirkadaha Nadaafadda waxa Todobaadkan ka mid ahaa Qodobadii ka soo baxay kulanka.
In Digniin adag loo diro dhamaan cidkasta oo lagu qabto in ay samaysatay Waraaq Cashuureed Been abuur ah,gaar ahaan waxay Digniintani ku Socotaa Gaadiidlayda ku shaqaysta adeega Qaadista Dadwaynaha (TAX)oo qaar ka mid ah lagu qabtay in ay samaysteen Waraaq cashuureed Been abuur ah.
In Agaasimayaasha iyo Gudoomiyayaasha Waaxaha kala duwan ay sii kordhiyaan sida Wanaagsan ee ay ugu Shaqeeyaan Bulshada ay Maamulaan Si ay u Fududaato Hawlaha shaqo ee ka socda Xaruumaha Kala Duwan ee DHH.
In Xaafadaha Magaalada Hargeysa lagu dhiirigaliyo in ay ilaaliyaan Nadaafadda sidoo kalena ay si joogto ah ula Shaqeeyaan Waaxda Degmada ee laga Maamulo Xaafadda.
In la abaalmariyo Shaqaalaha Dawladda Hoose ee Hargeysa intooda Mudan.
In ay dadku ka durkaan Goobaha ay ka socdaan Dhismayaasha Wadooyinka ee ka socda Gudaha Caasimadda Hargeysa.
Golaha Wakiillada Somaliland oo horkeeni doono odoroska Miisaaniyadda Qaranka ee 2022-ka